Ilay lehilahy dia i Kornelio. Manamboninahitra ao amin’ny tafika romanina izy. Tsy mahafantatra an’i Petera i Kornelio, nefa nilazana izy mba hanasa azy ho ao an-tranony. Andeha hojerentsika ny fomba nitrangan’izany.
Eny, avy hatrany i Kornelio dia naniraka lehilahy sasany hitady an’i Petera. Ny andro nanaraka, rehefa nanakaiky an’i Jopa ireo lehilahy, i Petera dia teo amin’ny tampony fisaka amin’ny tranon’i Simona. Teo dia nataon’Andriamanitra izay hieritreretan’i Petera fa nahita lamba lehibe nidina avy any an-danitra izy. Nisy ny karazam-biby rehetra tao anatin’ilay lamba. Araka ny lalàn’Andriamanitra, dia naloto tsy azo nohanina ireo biby ireo, ary anefa dia nisy feo nanao hoe: ‘Mitsangàna, ry Petera. Vonoy ary hano.’
Nitory tamin’ireo olona tafavory ireo izao i Petera. ‘Hitako fa raisin’Andriamanitra ny olona rehetra izay maniry hanompo azy’, hoy i Petera. Ary raha mbola niteny izy, Andriamanitra dia nandefa ny fanahiny masina, ary nanomboka niteny tamin’ny fiteny samihafa ny olona. Izany dia nahatalanjona ireo mpianatra jiosy izay niaraka tamin’i Petera, satria nieritreritra izy ireo fa ny Jiosy irery ihany no nankasitrahan’Andriamanitra. Koa nampianatra azy ireo izany fa Andriamanitra dia tsy mihevitra ny olona avy amin’ny foko iray ho tsara kokoa na lehibe kokoa amin’Andriamanitra noho ny olona avy amin’ny foko hafa iray. Moa ve tsy zavatra tsara tokony hotadidintsika rehetra izany?
Hizara Hizara Nitsidika An’i Kornelio i Petera
my tant. 109